Sunday March 08, 2020 - 10:06:27 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmad Maxamad Islaam Axmad Madoobe ayaa hadal dheer oo uu ka jeediyay Kismaayo diiradda ku saaray khilaafka iyo gacan ka hadalka ka dhaxeeya DFS iyo maamulkiisa.
Wuxuu madaxda DFS ku eedeeyay in ay sameeyeen xad gudub ka dhan ah Jubbaland markii ay ciidamo kusoo daabuleen gobolka Gedo iyagoo aanan ka fiirsan cawaaqibka ka imaan kara.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu Farmaajo ugu baaqay inuu noqdo nin u diyaar ah sidii loo joojin lahaa colaadda haatan socota, haddii kalana ay jirto qaab kale oo loo wada hadllo oo uu ula jeedo dagaal.
Wuxuu isku muujiyay inuu yahay nin sharciyad u heysta inuu hoos galo dowladda Kenya oo ay ciidamadeedu heystaan Kismaayo iyo magaalooyin kale, isagoo DFS ku eedeeyay in la wato oo ay Itoobiya gadaal kasoo riixayso.
Sida xaqiiqda ah waxaa labada dhinac kala wata Xabashida iyo Kenyaatiga kuwaasoo iyagu u taagan sidii ay u dhaqan galin lahaayeen heshiis hoose oo ay wada galeen oo ahaa in aysan Soomaaliya dib dambe uga dhalan dowlad sax ah waxaana arrintan jaamacad ku taalla Mareykanka ka sheegay madaxweynihii Kenya ee dhawaan Geeriyooday ee Daniel A Moy.